Posted on फ्रेवुअरी 19, 2010 by yekloyatri
विवाहका लागि केटाकेटीको उमेर कति वर्षको हुनुपर्छ ? १८ वा त्योभन्दा माथि । यो नेपालको मुलुकी ऐनले नै किटानी गरेको छ । उमेर नपुगी वा केटाकेटीको स्वीकृतिबेगर बिहे गराए कानुनी कारबाही हुने छ । अझ नाबालक बिहेको त
बालबिबाह कानुनी रूपमा दण्डनीय भए’bout उनले भने, कानुनमा के छ थाहा छैन आफूहरूको परम्परा नै सानै उमेरमा विवाह गरिदिने चलन छ । सामान्य परिवारको भए पनि केटा पक्ष भने बैन्ड बाजा र नर्तकीसहित आएका थिए । विवाह सम्पन्न भए पनि उनीहरूको परिपक्व उमेरमा दोङ्गा अर्थात गौना गरेर घर पठाइने चलनले गर्दा नाबालिका आमा बुबाकै घरमा बसेकी छन् ।
« विदेशस्थित नियोगमा रहेका घर-जग्गा एमालेले कार्यशैली नसुधारे सरकारबाट हट्ने सुजाताको चेतावनी »
Mission, on फ्रेवुअरी 19, 2010 at 10:27 अपराह्न said:
Nepal is beautiful in the world but our thinking or society is very poor in world that why happen it in Nepal.
Mission, on फ्रेवुअरी 19, 2010 at 10:28 अपराह्न said:
Nepal is beautiful country in the world but our thinking or society is very poor in world that why happen it in Nepal.